Mpanamboatra tavoahangy fitaratra | Mpamatsy tavoahangy fitaratra China
Vokatra fonosana plastika
Tavoahangy tavoahangy vita amin'ny alim-bary aluminium
Tavoahangy maitso sy tavoahangy labiera
Tavoahangy kosmetika 【Fitaovana mahasalama sy azo antoka】 - Ny tavoahangy famaohana zavona dia vita amin'ny fitaovana nankatoavina, tsy misy BPA, tsy misy firaka. Mandritra izany fotoana izany dia azo ampiasaina indray ireo tavoahangy rehetra ireo, azonao atao ny manadio azy rehefa avy nampiasaina ary nitahiry azy tsara. Design Volavola fanaporofoana mivaingana】 - Ny tavoahangy plastika kely misy fantsom-bozaka sy porofo mivoaka ao anatiny izay miaro ny valizinao tsy hilatsaka sy handraraka. Ity endrika ity dia hahatonga anao hahatsapa ho maivamaivana kokoa mandritra ny dia. 【Spray Mist tsara】 - Ny tavoahangin-tsinay dia mandray nanometer ...
Tavoahangy fisotro malefaka sy tavoahangy manitra
3. tavoahangy menaka oliva  mahandro sakafo matsiro sy mahasalama indrindra  mitazona ny menaka oliva voaro amin'ny fiparitahan'ny oxygen, hazavana & hafanana Vita amin'ny vera avo lenta ekipa, hanome anao serivisy kalitao tsara indrindra. Raha manana fanontaniana ianao dia mifandraisa aminay.  Hikarakara azy io ara-potoana isika. Supply: Manana ny ozininay manokana izahay, ka afaka manome ny vokatray. Ny orinasanay manokana momba ny menaka oliva ho an'ny ...
Tavoahangy grolsch ho an'ny famokarana labiera. Ny tavoahangy labiera dia tsara amin'ny fanaovana labiera, tavoahangy Kombucha, na tavoahangy fanamoriana! Ireo tavoahangy Flip Top ireo dia hanamora kokoa ny fanamboarana trano! Ny tombo-kase tsirairay avy amin'ny tavoahangy fitaratra tampoka mafy. Ny labierao dia hijanona ho vaovao sy arovan'ny tombo-kase amin'ity tavoahangy tampoka ity! Ny tavoahangy vera amber dia miaro ny atiny amin'ny taratra UV manimba. Tavoahangy vera volontsôkôla no aleon'ny tavoahangy labiera na tavoahangy misy fermenta! Ny tavoahangy fitaratra misy Caps dia mitazona 500 mL, na 16 oz, izay mitovy amin'ny 1 Pint. Dar ...
Andrahoy ny sakafo matsiro sy mahasalama indrindra mitazona ny menaka oliva voaro amin'ny fiparitahan'ny oxygen, hazavana & hafanana Namboarina tamin'ny vera avo lenta, mateza mateza sy mahataparitaka tolotra tsara: manana ekipa tsara izahay, hanomezana tolotra kalitao tsara indrindra anao . Raha manana fanontaniana ianao dia mifandraisa aminay. Hikarakara azy io ara-potoana isika. Famatsiana: Manana ny ozininay manokana izahay, ka afaka manome ny vokatray. Ny orinasanay manokana momba ny menaka oliva mandritra ny folo taona mahery, matihanina ...
Anaran-divay divay divay divay 250ml, 375ml, 500ml, 750 ml karazana famehezana cap / pvc bosoa Fonosana paleta hazo, 40HQ iray: paleta 21. paleta iray: faribolana 1575. na baoritra taratasy MOQ 10000 santionany Fanolorana santionany Eny Fandaminana santionany Rehefa voamarina dia halefa ao anatin'ny 7 andro ireo santionany. Ny fahafaha-manao vazivazy dia 750 ml, mena divay. Izy io dia manana ety ivelany madio sy madio miaraka amin'ny vera vatosanga sy ny punk ambany. Kapsule isika miaraka amina endrika kanto, tsy misy kofehy hita maso, ary mamorona porofo manelingelina ...
Anaran'ny vokatra 250ml fikolokoloana manokana fikolokoloana tavoahangy tavoahangy tavoahangy PET Fahazarana namboarina 250ml MOQ 10000 pcs Lanja 23g Tenda hatetika 24/410 Endri-javatra famaritana: 1. Fitaovana: PET. Ny fitaovana tany am-boalohany dia madio tanteraka sy vaovao, tontolo iainana, mety tsara amin'ny fonosana kosmetika, fonosana ara-pitsaboana sy sakafo ihany koa. 2. Loko: ny pantone misy ny loko na santionany tena izy raha mila fanazavana. 3. Fanontana: Pirinty vita amin'ny landy, fanaovana pirinty mafana ary fanontana offset, taratasy la ...
. Tavoahangy Cosmetika 【Fitaovana mahasalama sy azo antoka】 - Tavoahangy famaohana zavona dia vita amin'ny akora ekena, tsy misy BPA, tsy misy firaka. Mandritra izany fotoana izany dia azo ampiasaina indray ireo tavoahangy rehetra ireo, azonao atao ny manadio azy rehefa avy nampiasaina ary nitahiry azy tsara. Design Volavola fanaporofoana mivaingana】 - Ny tavoahangy plastika kely misy fantsom-bozaka sy porofo mivoaka ao anatiny izay miaro ny valizinao tsy hilatsaka sy handraraka. Ity endrika ity dia hahatonga anao hahatsapa ho maivamaivana kokoa mandritra ny dia. 【Spray Mist tsara】 - Ny tavoahangin-tsinay dia mandray nanomete ...
Ny tavoahangy misy menaka manitra vita amin'ny vatosary mangarahara no fitoeran-jaza lavorary ho an'ny ranomanitra sy kôlônta. Afaka mameno mora foana ireo fifangaroan-menaka tena ilaina ianao, na mandraraka menaka manitra tianao indrindra eran'izao tontolo izao. Mety koa izy io amin'ny fanaovana menaka manitra fanomezana na fanomezana Krismasy. Ny tavoahanginay lafo vidy dia mitazona hatramin'ny iray grama ny hanitra ankafizinao. Ireo atomika metaly mamirapiratra dia mamoaka fofona manitra. Ny satroka akrilika frosted dia manampy refinement hafa izay tsy ataon'ny tavoahangy hafa, ary tsy ...